ပွဲကြိုက်ခင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ပွဲကြိုက်ခင်
Posted by ဇီဇီ on Apr 18, 2013 in Creative Writing, Food, Drink & Recipes | 51 comments
ကိုနေဝန်းနီရဲ့ ပွဲကြိုက်သူများဖတ်ပြီး ပွဲဈေးကို လွမ်းသွားလို့ ရေးလိုက်ရတဲ့ စာပါ။
ကိုယ့် ဆရာမြင်ရင်တော့ ဒီ “အစား” ပဲ ပြောနေတယ် ပြောတော့မယ်။
တတ်နိုင်ဘူး။ ဆက်စပ်တွေးမိတာလည်း ဒါပဲရှိတယ်။
မန်းလေးမှာ က ဆောင်းဝင်ပြီဆိုရင်ကို ပွဲဈေးတွေ စပြီလေ။
ရှိသမျှပွဲတွေလည်း က ကြပြီ။
ကိုယ်ကတော့ ရုပ်ရှင်ခေတ်မှာ လူဖြစ်လားမသိ ပွဲကို ကြည့်ချင်လွန်းလှ၊ ကြိုက်လှချည်ရဲ့ မရှိပေါင်။
ပွဲဈေးလည်ရတာပဲပျော်တယ်။ လည်ရင်လည်း တခြားနေရာမသွားဘူး။ မုန့်ဆိုင်တွေပဲရယ်။
မြန်မာမုန့် တွေ ကို အဓိက စားလို့ရတာလည်း ပွဲဈေးမှာပဲကိုး။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပွဲကြိုက်ခင် ပဲပေါ့လေ။ ပြီးမှသာ ပွဲခင်းမရောက်ပဲ မုန့်တန်းရောက်နေတတ်တာ။
ပြောပြဦးမယ်။ ငယ်တုန်းက အဘိုးအိမ်သွားလည်ပြီး နေနေတုန်း အဒေါ်တွေဆီ စာလာမေးတဲ့ ကျောင်းသူလေးတွေက ကိုယ်တို့မောင်နှမတွေကို ချစ်တော့ ပွဲဈေးခေါ်ပြီး မုန့်လိုက်ကျွေးတာ။
လူကြီးတွေမသိပဲ လိုက်သွားရပါ့မလားဆိုပြီ: အဖိုးက တော်တော် ဆူ တာ ခံရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပွဲဈေးတန်းဆိုတာ ဒါပါလားလို့ သိသွားတာ။
အဖိုးက ကိုယ်တိုင်လည်း မသွားဘူး။ သမီးတွေ မြေးတွေ သွားတာလည်းမကြိုက်ဘူး။ သူတို့ခေတ်က ပွဲဈေးလည်တယ်ဆိုတာ ဖင်ဆိတ်ခံချင်လို့ တဲ့။ အဲလိုပြောတော့ သူ့သမီးတွေက မလှုပ်ရဲဘူး။
အရွယ်ကြီးကောင်ကြီးမားနဲ့ ကြောက်ကြတာ တဲ့ ။ သူတို့ အဖေကိုပါ။
ကိုယ်တွေ လက်ထက် ဒီလောက်ကြီးလည်း မဆိုးတော့ပါကြောင်း၊ အမျိုးကောင်းသမီးကို ဖင်လိုက်ဆိတ်ရအောင်လည်း ရှားရှားပါးပါးခေတ် မဟုတ်တော့ပါကြောင်း အဖိုးကို နားခံသာမဲ့ စကားလုံးလေးတွေ သွင်းပြီးသကာလ မောင်နှမတွေ အပြင်လည်ခွင့်ရပါတယ်။
(နောက်ဆို သူတို့ဖြစ်ချင်တာမှန်သမျှ အဖိုးကို ပြောပေးရတဲ့ စကားပြန်ကြီးကိုဖြစ်လို့။)
ဒါတောင် ယောင်္ကျားလေးလို ဝတ်သွားဆိုလို့ ဆောင်းတွင်းရော ဆောင်းတွင်းမို့ ရုပ်မပေါ်အောင် သွားရတာပါ။ မောင် ၆ ယောက်နဲ့သွားတာဗျာ။ ဘယ်သူမှ မိန်းမလို့ မမြင်ဘူး။ ကိုယ့်ကို။
နယ်မှာ လိုက်နေတော့လည်း နယ်စုံမှာ ၁၂ ပွဲ ဈေးတိုင်း မလွတ်ခဲ့။
ပွဲမိန့်လက်မှတ်ထိုးတဲ့ ထဲ ကျန်းမာရေး မှာ ကိုယ့်ဖေဖေလက်မှတ်ပါမှဆိုတော့ ဒီမျက်နှာနဲ့ နယ်ပွဲဈေးသည်တိုင်းဆီမှာ ကြိုက်ရာ နှိုက်မြည်းပေါ့လေ။
သွားတိုင်းလည်း ဆေးရုံက ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပဲသွားတယ်။ ကိုယ့်ဖေဖေနဲ့ ဆို ဟိုအစားအသောက်က ဘာဖြစ်၊ ဒီ အစားစာက ဘာမကောင်း စသည်ဖြင့် အပြန် လက်ဘလာ၊ ဗိုက်ဟောင်းလောင်းနဲ့ပဲ ပြန်ပြန်လာရတာကိုးဗျ။
မေမေကတော့ ဖုန်ထူ၊ လူရှုပ်ကို မကြိုက်လို့ မလိုက်ဘူး။
ကိုယ်ရွေးချယ် ဝယ်လာတဲ့ အစားအသောက်တွေတော့ ၂ ယောက်လုံးစားတယ်ရယ်။ သူတို့နဲ့ ဘယ်နယ် ဘယ်လောက်ခေါင်ခေါင်လိုက်ပြီး ဒေါင်ကျကျ ပြားကျကျနေတတ်တော့ အားကိုးတာလဲ အဲဒီက စ တာပါ။ ကိုယ်ကတော့ ဒေသစာ ကောင်းကောင်းစားရ ကြိုက်တာပဲရယ်။ ပျော်နေတာပဲရယ်။ နောက်မှ ဒေသစာတွေ အကြောင်းရေးဦးမယ်။
ထားပါတော့။ မုန့် စာရင်း တန်းစီရေးမလို့ ဟိုမှာ ဒီ မှာ မမြင်ဖူးဘူး ပြောမှာစိုးလို့ နယ်စုံက အချိန်စုံရောင်းတဲ့ ပွဲဈေးမုန့်တွေဖြစ်ပါကြောင်း စကားကြောရှည်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
စစချင်း ပွဲဈေးမှာ တွေ့တတ်တာက ဗန်းတွေနဲ့ ထည့်ပြီးရောင်းတဲ့ မုန့်တွေပေါ့။ ဘာတွေတုန်းဆို………
ငှက်ပျောသီး ဆနွင်းမကင်း/ ငှက်ပျောပူတင်း
မုန့်ဆန်း စတာတွေ ကို ကိုယ်ကြိုက်သလောက်ဝယ်ရင် မုန့်သည်က ဗန်းလေးထဲကနေ ကတ်ကြေးလေးနဲ့ ညှပ်ညှပ်ပြီး ရောင်းတာပါ။ အမြည်းလည်း ကျွေးတတ်ပါတယ်။
နောက် ဆက်သွားရင် တွေ့တတ်တဲ့ အသည်တွေက……..
ဘူးသီးကြော်၊ ဘယာကြော်၊ ပဲကပ်ကြော်၊ ပုစွန်ခွက်ကြော်၊ ပြောင်းဖူးကြော် စတဲ့ အကြော်စုံသည်နဲ့ ဘေးမှာ ရှိတတ်တဲ့ အသည်က တော့
ခဲလန်ချောင်းလို့ ခေါ်တဲ့ ကောက်ညှင်းကျည်တောက် သည်နဲ့
ကောက်ညှင်းပေါင်း သည် တို့ပါ။
အိမ်အတွက် အဝယ်များတတ်တဲ့အစားအသောက်ပေါ့၊ အိမ်ကြမှ ကိုယ်လည်း လူကြီးတွေကပ်ပြီး ကောက်ညှင်းပေါင်း အကြော်စုံလေးကို ရေနွေးကြမ်းလေးနဲ့ စားရတာ အဲဒီ ဆောင်းတစ်ညပေါ့လေ။
နောက်ပြီးတော့ ဆန်နဲ့ လုပ်တဲ့ မုန့် တွေ ရောင်းတဲ့ အတန်း……..
ပြောဖူးပါတယ်။ မုန့်လင်မယားကို ငုံးဥလေးဖောက်ထည့်ပြီး စားရတာ အရမ်းကောင်းပါဆို။ ကျန်တာတွေကတော့ အထူးပြောတော့ပါဘူးနော့။
နောက်တစ်တန်းကတော့ ကောက်ညှင်းနဲ့ လုပ်တဲ့ မုန့်တန်းပါဗျား။ ရောက်ပြီးရင် ပြန်မထွက်ချင်တဲ့ နေရာပေါ့။
မုန့်လက်ကောက် စတဲ့ မုန့်လေးတွေကို ကောင်းနိုးရာရာ တစ်ခုခြင်းရွေးဝယ် စားရတာလည်း အနုပညာပါပဲလေ။ မစားတတ်ရင် တစ်မျိုးတည်းနဲ့ ဗိုက်ပြည့်ပြီးပြန်ရရင် မတန်ဘူးကိုး။
ပြီးတော့ ဆောင်းတွင်းမုန့်ဈေးတန်းလည်ရင် စားလို့ကောင်းတဲ့ တစ်နေရာရှိသေးတယ်။
အရမ်းအေးတဲ့ ညတွေဆို ပြောင်းဖူးဖုတ်သည်ရဲ့ မီးဖိုနား မီးလှုံရင်း ပြောင်းဖူးဖုတ်၊ ထန်းမြစ်၊ ပြောင်းဖူးပြုတ်၊ ပဲမြစ်ပြုတ် စတာလေးတွေ စားပြီး ထိုင်ရတာလည်း အရသာပဲ။
နောက်တစ်မျိုးက ဈေးတန်းထဲ စားလို့လည်းရ ဝယ်သွားပြီး အထားနည်းနည်း ခံတဲ့ မုန့်မျိုးပေါ့။
ဇီးတော်ဖီ၊ ဇီးကြံသကာ ခေါ်မလားမသိ ဂန့်ဂေါဘက်မှာ ရောင်းတတ်တယ်။
အုန်းမှန်ကူ စတာမျိုးတွေပေါ့။ သူ့ဒေသစားစရာအလိုက် ရောင်းကြတာပဲ။
ခု ရှိမရှိမသိတော့တဲ့ မုန့်က မုန့်ကြိုးလိမ်၊ မစားရတာတော့ အတော်ကြာပြီ။
နောက်ပြီး ဂျုံမှုန့်နဲ့ ကြက်ဥအစာသွတ်ထားတဲ့မုန့်လေ “မုန့်သိုင်းခြုံ” လို့ခေါ်တယ်။ အိအိလေး အရမ်းစားလို့ကောင်းတယ်ရယ်။
သာကူကြို၊ ဂျုံကြိုပူပူ လေးတွေကလည်း စားချင်စရာတစ်မျိုးပါပဲ။
နောက်တစ်မျိုးက ထန်းသီးမုန့်၊ အုန်းသီးခြစ်လေတွေ ဖြူးစားရတာ။ ဆိမ့်ဆိမ့်လေးရယ်။ ရှလွတ်။
ပေါက်ပေါက်ဆုပ် အကြီးကြီးတွေရော စားဖူးကြသလားဟင်။ ချိုဆိမ့်ဆိမ့်နဲ့။ ကိုယ်ကတော့ တခါသားလား စားဖူးပါတယ်။ နောက်မမြင်ဘူးတော့ဘူး။
ဟီး။ နောက်အရမ်း စားတတ်တဲ့ ပွဲဈေးမုန့်ရှိသေးတယ်။
ဘာကောင်းသလဲမမေးပါနဲ့။ နောက်ရက် ဗိုက် အနာခံပြီး စားတာ။
ထန်းလျက်ရည် ဆန်းထားတဲ့ ခါကြာမုန့် ဆိုတာလည်း ရှိသေးတယ်။ ကြွတ်ကြွတ် ချိုချိုလေး နဲ့ မြည်းလို့ကောင်းတာပဲရယ်။
ဒီ ဆောင်းတွင်းတော့ မန်းလေး ဘုရားပွဲ တစ်ပွဲပွဲနဲ့ တိုက်ပြီး ပြန်မလားလို့။
ကဲပါလေ၊။ ဒီ လောက် ရေးရတော်ပါပြီ။
ခုရေးရင်း ဗိုက်က ဆာလာပြီး စားချင်စိတ်တွေ ပေါက်ပေါက်လာလို့ပါ။
သိတာရှိလည်း လိုတာတွေ ထပ်ဖြည့်ပေးသွားပါနော့။
ဖင်ဆိတ်တဲ့ခေတ် မရှိတော့ဘူး ..
လက်နှစ်ဘက်စလုံးနဲ့ ဇိကနဲ ဖမ်းကိုင်တဲ့ ခေတ်ရောက်သွားပြီလေ…
မဆိုင်တဲ့ ဘက်ကို မဆွဲနဲ့။
နာကို က သတိလက်လွတ်ရေးမိတာပါအေ။
ရ နှစ်လောက်ချစ်ခဲ့ရတဲ့ ရင်ဝှက်ပန်းမို့ ခုထိစိတ်မနာနိုင်သေးပါဘူး။
~~~ဘယ်သူပြောပြော မကောင်းဘူးလား ချစ်မှာပဲ~~~
ဟီ ဟိ… “ဆိတ်”တာ အတုအစစ်ခွဲချင်လို့ထင်သဗျ…
ကျုပ်တို့ခေတ်မှာတော့ သားရည်ကွင်းနဲ့ အလောင်းအစားပစ်မိလို့…
ဆယ်တန်းနှစ်ကျမှာ ကျောင်းအုပ်ကြီးရုံးခန်းရောက်ဖူးတယ်… အား ဟိ
စလုံး လေဆိပ်မှာ သားရေကွင်းသိမ်းတယ်။ ယူမလာနဲ့နော်။
မြန်မာအမျိုးသမီးဇာအကျီ င်္ပါးလေးတွေဝတ်.. အတွင်းဘော်လီအကျီကြိုးရွှေကြိုးတွေဘာတွေနဲ့.. မြင်အောင်လုပ်တဲ့ခေတ်ရှိခဲ့ဖူးတယ်..
အဲဒါ.. ပွဲဈေးတန်းတွေမှာ.. အဲလိုမြင်ရင်.. ရဟန်းပျိုတွေက.. ချိပ်နဲ့ချိတ်ပြီး.. ဖြဲပစ်ဆုံးမတဲ့ခေတ်ရှိဖူးတယ်လို့.. ဖတ်ဖူးတယ်..
.. မြန်မာ့မုန့်ဈေးတန်းတခုလောက်.. မြန်မာပြည်ကမုန့်မျိုးစုံလုပ်တတ်သူတွေ.. ခေါ်ပြီး.. ယူအက်စ်မှာလုပ်ရင်.. တော်တော်အောင်မြင်ပြီး.. ကိုယ်လည်းစားရမှာ..
မြန်မြန် ကြံပါ တဂျီးရယ်။
အဲ့လာပျောလာပေါ့ ဒို့ဘားမန်းတေ လိုနေတာ
ယိုးဒယားကငတိတေ ဟင်းချက်စာအုပ်ထုတ်ရောင်းကြတယ် ဘိုလို
ရွိုင်ရယ် ထိုင်း (ထွီ ကတော့ပါရဲ့) ကွီဇင်းန်း ဆိုပီး. စာရေးသူ ဒါ့ပုံရိုက်သူ ဟင်းချက်သူ ထုတ်ဝေသူ နဲ့ ခရီးသွားဆားဗစ်ပေးသူတေ
အားလုံး ဝင်းဝင်း ပေါ့ခညာ.
ကြီးမေကတော့ ပြောသွားတာပဲ အဲ့စကားကို မိဂီ လေကျနဲ့ မှတ်မိသလောက် ပြန်ဆွဲရရင်.
ကျနော်တို့က မနာလိုဝန်တိုစိတ်ကြီးတယ် သူများကိုယ့်အပေါ်ရောက်မှာ မလိုလားဘု
အချုပ်က ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုမရှိတာ. အဲ့ဒါကိုဖျောက်ဖို့လိုတယ်
Why not “Myanmar Salads 101”
Why not “Easy Myanmar Cuisine”
Why not “Make it Easy Myanmar Foods in 10mins ”
We can do it. Cz we R Myanmar.
ဘယ်အချိန်ကတည်းက လွမ်းနေလဲမသိ ပို့စ်လေး တက်လာတာနဲ့တင် တန်းပြီးတော့ကို ရေးလိုက်တာ
ကိုယ်တွေ မကြားဖူးတဲ့ မုန့်နာမည်တောင် ပါသေး
ဒါလောက်တောင် မှတ်ဉာဏ်ကောင်းတာက ပင်ကိုယ်ကြောင့်တော့ ဟုတ်လောက်ဖူး
ရေးစရာတွေ ရမ်းရမ်း ရှိလာတော့တာပါပဲကွယ်။
အောက်က နှစ်ကြောင်းကို ထောက်ခံတယ်
အပေါ်က တစ်ကြောင်းကိုတော့ ကန့်ကွက်ချင်မိတယ်
အနော်က တောသူဆိုတော့ ဘုရားပွဲရောက်ရင် သနပ်ခါးတုံး သယ်ပဲ ရှာတယ်ဗျို့ …
ပွဲလဲကြိုက်ဘူး ၊ မုန့်တွေလဲ စားဘူး ဗျာ ….. :hee:
တစ်ချို့ ဆေးမြီးတိုသည်တို့ အကောင်ပလောင်သည်းခြေတို့ လည်း အတော်ရောင်းရတယ်။
တစ်ချို့က ပိုစတာတွေ ရွေးကြတာပဲ။
ကျုပ်က တော့ အဲတာတွေ ကြည့်ရုံပဲ ဖြတ်သွားတာ။
သနပ်ခါးတုံးက ကြိုက်သော်လည်း မရွေးတတ်။
မုန့်နာမယ်တွေ တောက်လျောက်ဖတ်လာတာ … ငယ်ငယ်ထဲက ပွဲဈေးသွားရင် မုန့်လေပွေကို ညပ်ကြီးနဲ့ မီးပေါ်ကင်ပေးတာစောင့်စောင့်စားနေဂျ.. ဒါမပါရင်တော့ ပြောမယ်လို့ .. ဆွိ လူဇိုး ဘာမုန့်မှမကျန်အောင် အကုန်ပြောသွားဒယ် ….
ဂလို ပေါက်ကရတွေ ကြိုက်တာ တူလို့ ချစ်ရတာပေါ့။
ဟိုဘဝကလေ.. ဟိုဘဝတုန်းက.. ဘယ်ဘဝလဲတော့မသိဘူး..
စားဖိုမှူးကတော် သေလို့ ဝင်စားတာလားမတိဖူးနော်..
အစားအသောက်အကြောင်း လျှာလည်အောင် ရေးတတ်လို့..
မြည်းစား ရတဲ့ဟင်းက ပိုအရသာရှိပါတယ်တဲ့…
ဘယ်နဲ့ ဖြစ်ချင်းဖြစ် စားဖိုမှူးဖြစ်လိုက်စမ်းဘာရယ်။
(ခု ဘာမှ မချက်တတ်တာ တပိုင်း)
ခုတော့ စားဖိုမှူးကတော်ဝင်စားတယ်ရယ် ရှိရသေး။
မြည်းစားရတာထက် ခိုးစားရတာပိုချိုတယ်ကွဲ့။ မှတ်ထား။
ဟီ ဟိ… ဂလောက်အစားမက်မှတော့ ပါးကြီးနှစ်ဘက်ဖောင်းမှာပေါ့…
အချင်းချင်းတွေ ချိတ်မဆိုးရဘူးနော်…. အား ဟိ
ကိုဖမ်းကိုင်လေးသာ ညှစ်ရင် ကျုပ်တော့ သေပျော်ဘာဘီ တော်
ဟိုကလည်း အလုံးလေးတေဆို အားယီး စိတ်ဝင်စားတာကလား. ခိခိ
ဟို မယ်လိုဒီ တီးလုံးလေးတေ ကိုပျောပါဒယ်
အဲလာ အစားမက်လို့ မဟုတ်ဘူးလို့။
အဲ့လာကြောင့် သူကလေးက ချစ်စရာလေးလို့ ပြောသွားတာနေမှာ။
သူကလေးသာ အဟွာမယ်ဆို ခွင့်ပြုရမှာပေါ့။
ဒီအဖေ၊ ဒီသားဆက်ဆွဲမှ နာ့ ပို့(စ) လည်း အစားပို့(စ) ကနေ ညှီပါရောလား အရပ်ကတို့။
ကိုအောင်ပု များ သည်ပို ့စ်ကို ဖတ်မိခဲ့ရင်
အာပုံအကြောင်း မပါလေခြင်းလို ့ဇာ့ကို ပြစ်တင်မလားကွယ်
ခု ညှီနေကြတဲ့ တူတူမထူးဘူး။
ဘွပုသွားခေါ်ပြီး ဒီ အကြောင်းရှင်းပြခိုင်းရမယ်။
စားချင်ရဲ့လက်တို့…. ပွဲဈေးကမုန့်တွေထဲ ရေမုန် ့အကြိုက်ဆုံး.. ငယ်ငယ်ကမှတ်မိတာတော့ ပွဲဈေးတွေဆိုအညာကလူတွေမုန့်လာရောင်းကြတယ်ထင်တယ်.. အညာသားကြီးတွေချွေးအရွှဲသားနဲ့ကြော်တာ…အဲဒါကိုစောင့်ဝယ်စားရတာ.. ကောင်းမှကောင်း
ရေမုန့်ကို ပဲပြုတ်လေး၊ ငရုတ်သီးစိမ်းလေး၊ နံနံပင်လေး၊ နှမ်းထောင်းလေးနဲ့ အိုးကင်းကပ်လေး စားလို့ ကောင်းမှကောင်း။
ပွဲခင်းထဲ ဆိတ်တာ ဘယ်သူတုန်းမေးတော့ပါဘူး အန်လကယ်ကြီးရယ်။
ဟိုဘတ်က ကော်မန့်ကိုမြင်တော့ သဘောပေါက်ပါတယ်။
မန်းလေးပွဲဈေးမစည်တော့ဘူး ဆိုသော်လည်း ရှိနေသ၍ တော့ လည်ဖြစ်နေဦးမယ်ထင်ပါတယ်ဗျာ။
ပွဲအကြောင်းနဲ့ ဖင်ဆိတ်တာ ရယ်…..။ အကြောင်းအရာက နှစ်ခုဖြစ်သွားတာကိုး……။
ဆြာ့ ဆရာကြီးတွေရဲ့ စာရေးနည်း မဖတ်ဖူးဘူးလား…..။
ပြောချင်သောအကြောင်းအရာတစ်ခုထဲကိုပဲပြောပါ …..။ နှစ်ခုသုံးခု ပြွတ်သိပ်ပြီး မရေးရ ဆိုတာကို ဖတ်မထားမိလို့ ဖင်ဆိတ်တဲ့အကြောင်းကိုချည့် ရွေပြီး ပြောသွားကြတာ …..။ သူရို့ တုန်းကလည်း ဆိတ်ခဲ့ဖူးလို့နေမှာပေါ့ …..။ ခုတော့ ဖင်ဆိတ်တဲ့ ခေတ်မဟုတ်တော့ဘူးရယ်………..။
ကျနော်က အဲဒီ အကြောင်းကို အခင်းမှာပဲ ရေးတာလေဗျာ။
အဓိကပြောချင်တဲ့ အကြောင်းက တစ်ကြောင်းတည်း၊ အဲဒါကိုပဲ အလေးပေး ရေးတာပါဗျ။
အခုချိန်မှာတော့ မန်းလေးမြို့ရဲ့ အရင်က ရှိခဲ့တဲ့ ဘုရားပွဲ ရသ ကပျောက်သွားပါပြီ။
ဘုရားပွဲအစစ်ကြည့်ချင်ရင်တော့ မြို့သစ်ကို သွားမှတွေ့နိုင်တော့မယ်။
KZ တွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့ ဘုရားပွဲတွေက အခုချိန်မှာ ဘုရားပွဲ ပြီးသွားမှန်းတောင်မသိတဲ့ အနေအထားကိုရောက်နေပါတယ်။
ဒါဘယ်သူ့ကြောင့်မှာ မဟုတ်ဘူး ခေတ်ရဲ့ ရွှေ့လျားမူ့လို့ကြောင့်သာဆိုချင်ပါတယ်။
ဘုရားပွဲမှာ ဖင်ဆိတ်တဲ့ အလေ့အထကတော့ မရှိတာကြာပေါ့။
အခုခေတ်မှာ ဖင်ဆိတ်ချင်ရင် ဘုရားပွဲသွားဘို့ မလိုပါဘူး။
စိတ်ထဲကနေကျိတ်ပြိး ပစ်မှားဘို့လဲ မလိုတော့ကြောင်း။
ငွေရှာထားနိုင်ရင် အေးဆေး ဇိမ်နဲ့ဖင်ဆိတ်လို့ရတဲ့ နေရာတွေရှိကြောင်းပါခင်ဗျာ။
” ငွေရှာထားနိုင်ရင် အေးဆေး ဇိမ်နဲ့ဖင်ဆိတ်လို့ရတဲ့ နေရာတွေရှိကြောင်းပါခင်ဗျာ ”
အရမ်းတော်တဲ့ ၊ ကိုပေါက် ။ သိလိုက်တာ စုံလို့ ။
သားသား ၊ အဲလိုမျိုးတွေကို မရောက်ဘူးလို့ ။
မန္တလေး ရောက်ရင် ၊ လိုက်ပို့ပေးရမယ်နော် ။
ဒါနှင့် ၊ ဆိတ် ရုံပဲ ဆိတ် လို့ရတာလားဟင် ။
ဟီ ဟိ ၊ တစ်လွဲမတွေးကြပါနှင့် ။
ရိုက်ချင်ရင်ကော ၊ ရိုက်လို့ မရဘူးလားလို့ မေးချင်လို့ပါ ။
ဟီ ဟိ ၊ မေါင် ဂီ စလိုက်တာ ၊
မ ဇာလေး ရဲ့ Post တစ်ခုလုံးလဲ ညှီ ကုန်ပြီ ။ ဆောဒီး ။
ကျနော်ကပဲ ဖလန်းဖလန်းထ ရေးမိသကိုး။
ဟဲ ဟဲ ဦးဖော ….
အူး၄ရူပါနဲ့ဆို တောင်ပြုန်းပွဲသာသွား …
ကိုယ်လည်း( ) … သူလဲ( ) ဖောတပြန်… ဂျော့တပြန်ပေါ့ … အာဟိ
ခုတောင် မျက်လုံးထဲ မြင်ယောင်နေသေး …
ပြောမယုံကြုံမှသိတဲ့ လာထား လိုက်ပို့ပေးမယ်
ဖင်ဆိတ်တဲ့ ခေတ် နဲ့ ခု ဒီ ပျက်သုဉ်းသွားတဲ့ ခေတ်ကြားမှာ ပွဲဈေးတွေ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် လည်လို့ ကောင်းလိုက်သေးတယ်ဗျ။
ကျန်တာတော့ မ ပြောတော့ပါဘူးနော့။
ကျုပ် ဖဲရိုက်တာရော ဘယ်လိုသိတုန်း။
ဆွိ….ရေမုန့်ကို လမ်းသရဲမုန့်လို့ခေါ်မှန်း အခုမှ သိတယ်…
…အဲ့မုန့်က ကျန်တဲ့မုန့်တွေနဲ့မတူဘဲ ကပေါက်တိကပေါက်ချာနဲ့ကုလားစာလိုလို၊အသုပ်လိုလို၊
ဟင်းတစ်ခွက်လိုလို ခပ်မိုက်မိုက် အနံ့၊အရသာနဲ့လေ…ဟုတ်လားတော့ သိဘူး….
ပွဲဈေးတန်းလျှောက်ရင်း ဦးလေးတွေ၊အစ်ကိုတွေ ရံထားတဲ့ကြားထဲက မီးလင်းလင်းကြီးနဲ့လေ..
ရေမုန့်ဆို မစားတော့တာ ခု ဇရာထောင်းသွားတဲ့အထိပဲ..
နောက်တစ်ခါ ကြုံရင် ဝယ်ကျွေးမယ်။
ယောက်သွားလေးနဲ့ ခြစ် ပဲလေး ဖြူး ဗူးသီးကြော်နဲ့ စားရတဲ့ မုန့်ပေါင်းသည် ကို လဲ သတိရတယ်
အပေါ်က မုန့်တွေ အကုန်လုပ်ကျွေးမယ်ဆို အရှေ့ကျွန်းကို အလည်လာမယ်
အာ့တွေ အကုုန်ဝယ်ခဲ့ မယ်ဆိုု အလည်ခေါ်မယ်။
အူးလေး ကျွန်းမှားနေဒယ် ဗျ..
အဲ့ဒီ အဟွာကိုုင်နေတဲ့ ကျွန်း နဲ့ မှားစရာလာာာာား
ဂလိုညမျိုး စားစရာ ဘာမှ မရှိတဲ့ အချိန်မှ ဒီပို့စ်ကို ဖတ်မိတယ်…
ဖင်ဆိတ်တာ ပါလို့ သတိရမိတာလေး..
ကျုပ်တို့တော့ ငယ်တုန်းက ရွာ့ပွဲခင်းသွားတိုင်း ကောက်ညှင်းကျည်တောက်အရင်ဝယ်ရတာရယ်..
အဒေါ်တွေနဲ့ သွားရတာ ဆိုတော့ ..
ဟိုဒီကနေလက်ကမြင်းရင် အဲ့ဒါနဲ့ နှံရတာကိုးး.
ဒါနဲ့ မုန့်ဆီကြော်.မုန့်သိုင်းခြုံ နဲ့ မုန့်လေပွေကတော့ ကိုယ့်အကြိုက်..
အဲ့ လိုု အတွေ့ အကြုံနဲ့ စောင့်ရှောက်တတ်ရင် နောက်အခါ ပွဲဈေး သွားရင်ခေါ်မယ်။
ရွာအလှူတွေသွားရင် ပေါက်ပေါက်ဆုပ်ကို တဝကြီးစားရတယ်… ရွာတွေမှာက ရှင်လောင်းလှည့်လို့ ရွှေကြိုးတားရင် ပေါက်ပေါက်ဆုပ်ရယ်၊ မုန့်ဆီကြော်ရယ် ပေးရတာကိုး…
စပါးနဲ့ပေါက်ပေါက်ဖောက်တာကြည့်ရတာလည်းမိုက်တယ်..ပြီးရင် ပေါက်ပေါက်ဆုပ်အလုံးကြီးတွေလုံး၊ အခန်းထဲမှာ ထည့်ထား… အမွန်တို့က အဝင်တစ်လုံးအထွက်တစ်လုံးပဲ…
အဲ့ဒီအချိန်ပဲစားရတာ… တစ်ခြားအချိန်တွေမှာ အဲ့လိုပေါက်ပေါက်ဆုပ်တွေ ရှာလို့မရဘူး…
နောက်တစ်ခုက ပလာတာ နဲ့ ဒန်ပေါက်… အမွန်တို့မြို့မှာက ပလာတာနဲ့ ဒန်ပေါက်က ပွဲဈေးရှိမှ ရောင်းတာ… ငယ်ငယ်ကဆို ပွဲဈေးသွားရင် အပြန်မှာ ပလာတာကို ပါဆယ်ဆွဲလာတယ်…
နောက်တစ်ခုက အမွန်က ဆနွင်းမကင်း အရမ်းြံကိုက်တယ်.. ဟီး
ဟုုတ်တယ်။ အမလည်း ပေါက်ပေါက်ဆုုပ် ကိုု နယ် ပွဲ ဈေးမှာပဲ မြင်ဘူးတာ။
သမီးတော့ ပွဲဈေးလျှောက်တာ ဝါသနာ မပါဘူး … ပွဲလည်း လုံးဝမကြိုက် ၊ မကြည့်ဘူး …. ။
ဒါပေမယ့်လည်း … ကောက်ညှင်းကျီထောက်ကြိုက်လို့ ….
ပွဲဈေးရှိတာနဲ့ ကြုံလျှင် တခေါက်လောက်တော့ ဖြတ်လျှောက်ဖြစ်ပါတယ် ။ အရင်ကတော့ ပွဲဈေးက ဘူးသီးကြော်တွေ ပုစွန်ကြော်တွေ ကြိုက်တယ် …. ခုတော့ … ဆီများတာကြောင့် မစားဖြစ်တော့ဘူး …. ။
ပွဲဈေးတစ်ခုရဲ့ ပိုမို ပီပြင်တဲ့ ပြယုဂ်လို့ပြောလို့ ရတဲ့ ရဟက်ဆိုဒါရီးတွေ …. တဝှီးဝှီးအော်ပြီး … လည်နေတာရီးတွေလေ … ကျိပဲကျိတာ … မစီးရဲဘူး .. ။ တူညားတွေကတော့ ပျော်ဇယာကောင်းဒယ်ပေါပေမယ့် … ကိုယ်တိုင်ကိုက … ခိုင်ခံမှုအပေါ် သံသယရှိလို့ … မစီးရဲခဲ့ဘူး … ခိခိ ….. ။
ရဟတ်တို့ ချားတို့တော့ မွေးရာပါ ကြောက်တတ်လွန်းလို့ လုံးဝ မကစားဘူးရယ်။။
ပွဲဆို ပွဲဈေးမုန့်တန်းက လွဲရင် ဘယ်မှမသွားဘူး။
မုန့်တွေကို စုံလို့ ။ ကောင်းနိုးရာရာ ရွေးချယ်ဝယ်စားတတ်တာလည်း အနုပညာဆိုတာ အမှန်ပဲဗျ ။ ဟိုရက် ကလေ ဘိန်းမုန့်ရယ် ၊ မုန့်လင်မယားရယ် ၊ ထန်းသီးမုန့်လေးရယ် စားလိုက်တာ ဗိုက်ပြည့်ပြီး ကျန်တဲ့မုန့်တွေ မစားနိုင်တော့ဘူး ။ ။ ( မုန့်ခေါပြင် အမြည်းတောင်းစားတာရယ် ၊ ကရေကရာ အမြည်းနှိုက်စားတာရယ်ကလွဲလို့ပေ့ါလေ ဟိဟိ )
ဘိုက်ပြည့်အောင်မစားပဲ အကုန်စားလို့ရတဲ့နည်းနဲ့ စားသင့်တာ။
ဆောဒီး ပါ မမ ကေဇီရေ
….“ပဲတလှီး” လို့ခေါ်တာပဲ အဖြူမုန့်နှစ်ထပ်ကြားမှာ မဲမဲ(ပဲနဲ့ထန်းလျှက်ယိုထင်တယ်)တစ်လွှာပါတယ်
ဒါမဲ့ ခု နည်းနည်းရှာရခက်သွားပြီ။